Mayelana - Omaska
Siyakwamukela ku-website esemthethweni OMASKA umthwalo.
Sishayele : 0086 15350615781
Imeyili : sales018@baigouluggage.cn
Izikhangibavakashi Isikhwama Bag
Impahla Cover & Belt
OEM / ODM Izikhungo
Baoding Baigou Tianshangxing Bag sezimpahla Co.Ltd kuyinto nomkhiqizi professional ukwenza ekuthuthukisweni, ukukhiqizwa, ukudayisa kanye nokukhishwa Inayiloni isikhwama inqola, PU imithwalo kanye PC / ABS ipotimende ubhaka okuyinto has eminyakeni engaphezu kuka-18 nakho.
Ngaphansi kokuqondisa umphathi umongameli Nks Li amaqembu yomnyango Tianshangxing ezikhulayo continously ngenxa yokuhlangenwe nakho kwakhe emthwalweni ensimini.
Inkampani has Langchao Omaska ​​Balmatik njengoba umkhiqizo wabo siqu futhi ibambisane ezinye brand umthengi abadumile.
On imikhiqizo, esiqinile namazinga izinga amiswa kusukela ukuthuthukiswa ekukhiqizeni ukwenza imikhiqizo ukuba the best. On service, amakhasimende ezahlukene ezivela emazweni ahlukahlukene ndawo wanelisa ngaso sonke isikhathi.
Inkampani ihambisana nezikhathi innovates ngesisekelo emakethe. Imikhiqizo ukushintshela catagory ezihlukahlukene esikhundleni ohlobo olulodwa kuphela. Ama-oda okuthanda nguwe ziyamukeleka esikhundleni oda mass kuphela.
Kunikezelwa kokunikela amakhasimende imikhiqizo umhlabeleli ne service, Isiqubulo sethu sithi "Nge Ipulatifomu yethu ukuze Yanelisa Abantu Okuningi, Nge Imikhiqizo Yethu ukuze Benefit Amakhasimende Ngini"!
"Ukwenza wonke umkhiqizo ngokucophelela, Ukukhonza zonke ikhasimende ngokucophelela" kuyinto isiqondiso Tianshangxing ithimba. izinga okusezingeni intengo engcono imikhiqizo umgomo okuphakade Tianshangxing usebenzela. Sikholelwa ukuthi iqembu labantu nge imigomo kanye iphupho kuzodala izimangaliso. Masihlanganyele izandla futhi wenze omkhulu impumelelo ndawonye. Singabantu endleleni sonke isikhathi!
ikheli Factory: NO.12 Yanling komgwaqo, Qunyu emgwaqweni, CT umshini epaki zezimboni, Baigou edolobheni, (idolobha Gaobeidian) Baoding idolobha, isifundazwe Hebei, China.
esikhumulweni sezindiza esiseduzane: Tianjin Binhai sezindiza (noma Beijing dolobha sezindiza)
Kuthatha 3hours kusukela Tianjin noma Beijing sezindiza ibe yizimiso ngemoto
esiteshini esiseduze: Baigou esiteshini (noma Gaobeidian empumalanga esiteshini)
Kuthatha 20minutes kusukela Baigou stationt ibe yizimiso ngemoto
Kuthatha 40minutes kusukela Gaobeidian esiteshini empumalanga ibe yizimiso ngemoto
Factory contact umuntu: uMnu Allen (umphathi yokuthengisa)
Imininingwane Ucingo CHA .: 0086 15350615781
Ucingo : + 86-15350615781
Iwebhusayithi : www.tsxluggage.com
Ucingo : 0086 15350615781
Factory Ikheli : 12, Yanling Road, West Xingsheng Street, Baigou Town, Baoding, Hebei, China (Mainland)
Copyright © 2018 Tianshangxing Wonke Amalungelo Agodliwe. Okufakiwe Products - Ibalazwe - Hambayo Site
High Quality Ipotimende , Izikhwama School , Suitcase Sets 3 Pcs, Duffel Bag Nge ezinamasondo , 6pcs Kids Ukuphrinta Setha , Suitcases,
Silandele: Facebook Skype